Weligaa ma maqashay dhulka diatomaceous, oo sidoo kale loo yaqaan 'DE'? Hagaag hadaanay ahayn, u diyaar garow inaad la yaabto! Isticmaalka dhulka diatomaceous ee beerta waa weyn. Dhulka Diatomaceous waa wax soo saar runtii dabiici ah oo dabiici ah oo kaa caawin kara inaad ku beerto beer qurux badan oo caafimaad leh. Waa maxay Dunida Diatomaceous? Di ...
Shirka "2020 China Non-Metallic Mineral Mineral Conference and Exhibition Expo" oo ay soo qabanqaabiyeen Ururka Warshadaha Macdanta ee aan macdanta lahayn ayaa si weyn loogu qabtay magaalada Zhengzhou, Henan intii u dhaxeysay 11-kii ilaa 12-kii Noofembar. Martiqaad ay ka heleen Shiinaha Macdanta aan Birta ahayn ...
Gacmaha isqabsashada si looga guuleysto dagaalka lagula jiro cudurka faafa
Bishii Febraayo 3, 2020, xilliga muhiimka ah ee dagaalka ka dhanka ah "faafidda", Jilin Yuantong Mining Co., Ltd., si loo taageero ka hortagga iyo xakameynta cudurka cusub ee coronavirus, wuxuu warbixin cusub u soo saaray magaalada Linjiang Warshadaha Magaalada Linjiang iyo Macluumaadka Bur ...